हामीलाई स्वस्थ जीवनशैली चाहिएको छ, तर कसरी ? - Yohosamachar
April 8, 2020 April 14, 2020 योहो समाचार	0 Comments
हामीलाई स्वस्थ जीवनशैली चाहिएको छ । तर कसरी बन्न सकिन्छ? आज हामी जानकारी गराउन गइरहेका छौँ । सधै हाम्रो अव्यवस्थित जीवनशैली, खानपान, प्रदूषण आदिका कारणले हामीले चाहेर पनि आफूलाई स्वस्थ राख्न सकिरहेका छैनौँ । यसबाहेक तनावपूर्ण जीवनशैलीले पनि हामीलाई स्वस्थ भइरहन दिएको छैन । यसका साथै शारीरिक परिश्रमको कमी, व्यायामको कमी, अनियन्त्रित धुम्रपान तथा मद्यपान, अव्यवस्थित खान जस्ता कुराहरुले हामीलाई उमेरभन्दा अगाडि नै अस्वस्थ बनाइरहेको हुन्छ ।
हामीले प्रत्येक दिन खाने खानामा हरिया सागसब्जी, फलफूल, रेसादार खाना, झोलयुक्त खाना भन्ने बुझिन्छ । हामीले आफूलाई स्वस्थ राख्नका लागि हरेक दिन चार(पाँच पटक फलफूलको सेवन गर्नैपर्छ । यसबाहेक खानामा सागसब्जीको मात्रा बढी हुुनुपर्छ । बिहान ब्रेकफास्ट गर्न भुल्नु हुँदैन । बिहानको ब्रेकफास्टले हरेक व्यक्तिलाई आवश्यक उर्जा तथा शरीरका लागि आवश्यक शक्ति प्रदान गर्छ ।
हामी मध्ये अधिकांश व्यक्तिहरु प्रायः बिरामी भएपछि मात्र चिकित्सककहाँ जाने गर्छौं । यो असाध्यै खराब बानी हो । त्यसैले इमर्जेन्सी नभए पनि बेला(बेलामा अस्पताल गएर आफ्नो शरीरको नियमित जाँच गराइरहनु पर्छ । अत्याधुनिक जीवनशैलीका कारण पनि हामीले नियमित स्वास्थ परीक्षण गरिरहनु पर्छ । यसरी नियमित स्वास्थ परीक्षण गर्नाले गम्भीर स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न सकिन्छ । यसबाहेक उच्च रक्तचापका बिरामीहरुले हरेक दिन ब्लड प्रेसर जाँच्नुपर्छ । यदि रक्तचापमा घटबढ भयो भने तुरुन्त चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।
← स्वस्थ्य, सन्तुष्ट र खुसी जीवनको लागि क्षमाशिल बनौं
ध्यान के हो ? कसरी गर्ने ? →